Ergaa Baga Gammaddanii Obbo Shimallis Abdiisaa Dabarsan – Fana Broadcasting Corporate
Ergaa Baga Gammaddanii Obbo Shimallis Abdiisaa Dabarsan
Finfinnee, Fulbaana 30, 2012 (FBC) – Muummeen Ministiraa FDRI Dooktar Abiy Ahimad Badhaasa Noobelii Nageenyaa Idil Addunyaa Injifachuu isaanii Ilaalchisee Ergaa Baga Gammaddanii Itti Aanaa Preezdaanti Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Dabarsan.
Kabajamtoota Sabaa fi sablammootaa fi Ummattoota Itoophiyaa
Kabajamoo Muummee Ministiraa Dr Abiy Ahimad Badhaasa guddicha idil addunyaa Noobelii Nageenyaa bara 2019 injifachuun seenaa haaraa biyya keenyaa fi Afrikaaf galmeessuuisaaniif baga gammaddan baga gammanne!
Lammiileen Ityoophiyaa yeroo garaa garaa sadarkaa idil addunyaatti seenaa ummata gurraacha boonsu hojjechuun beekamu.
Kanaafis seenaan Injifannoo Gaarren Aduwaa irratti gonfannee fi injifannoon dirree atileetiksii idil addunyaatti galmeessine Itoophiyaaf qofa osoo hintaane Ardii Afrikaafuu kabaja olaanaa argamsiise.
Dachee keenyaaf gootota biqilchuun aadaadha! Ammas Goota Ilma Abbaa Gadaa, Muummee Ministiraa Itoophiyaa, Dooktar Abiy Ahimad nuuf gumaachitee jirti.
Dooktar Abiy Muummee Ministiraa biyya keenyaa ta’anii turtii yeroo gabaabaa keessatti hojii ajaa’ibsiisaa hojjetaniin badhaasa Nobilii idil- addunyaa injifachuun biyyakeenyaaf seenaa haaraa hojjechuun isaanii kan hundakeenya boonsedha.
Haala biyya keenya keessatti hanga ammaa baratamee hin beekneen hojii dipiloomasii cimaa biyyoota Gaanfa Afrikaa keessatti hojjetaniin naannoon yeroo dheeraaf rakkoo keessature nagaa fi tasgabbii akka qabaatu gochuun yeroo muraasa keessatti injifannoo olaanaa galmeessaniiru.
Biyya keessattis riifoormii geggeessaniin haala hin baratamneen jijjiirama galmeessisaa jiru.
Lammiilee sababa ilaalcha siyaasaa addaa qabaataniin mana hidhaa keessatti dararamaa turan kumaatamaan lakkaa’aman dhiifamaan akka gadi lakkifaman taasisuu fi Paartileen siyaasaa fi namoonni sababa ilalcha siyaasaatiin biyyaa bahuun waggoota dheeraaf biyya ambaa jiraachuuf dirqamanii turan biyyatti deebi’anii qabsoo siyaasaa karaa qaroomee fi nagaan geggeessuu akka danda’an dirree siyaasaa bali’isaniiru.
Biyya aadaan dimokiraasii keessatti dagaagee fi waljaalalaa fi tokkummaan ummattootaa keessatti mirkanaa’e uumuuf dhaabbilee dimokiraasii cimsuuf kutannoon hojjechaa jiru.
Biyya dhaloota egereef mijooftu uumuuf sochii bal’aa taasisaa jiraniin qulqullina naannoo, dhaabbii biqiltuu fi kunuunsa naannoo irratti ummata biyyattii daangaadhaa hanga daangaatti sochoosuun hojii dhalootaaf fakkeenyummaa qabuhojjetaniiru.
Biyya keenya keessatti rakkoolee yeroo dheeraaf kuufaman, keessattuu kanneen haqummaa dinagdeen walqabatan bu’uura irraa hiikuuf riifoormiiwwan diinagdee hojjechaa jiraniin biyya badhaatee fi fayyadamummaan lammiilee keessatti mirkanaa’e ijaaruuf halkanii fi guyyaahojjechaa jiru.
Kabajamoo Dooktar Abiy turtii gabaabaa hooggansa isaanii keessatti hojii guguddoo hojjetaniin biyya keessaa fi alatti haala ajaa’ibsiisaa ta’een fudhatama argataniin badhaasa idil addunyaa garaa garaa argachuu danda’uun isaanii geggeessummaa gama hundaan kennaniinf akkeenya ta’uu isaanii mul’isa.
Oromummaan nageenyaa fi jaalaala. Kabajamoo Dr Abiy ammo duudhaa kanaan guddatan.
Kanaaf geggeessummaa yeroo gabaabaa keessatti injifannoo ulfaataa kana gonfatan.
Injifannoon kun kan hunda keenyaa ta’uu beeknee, hundi keenyayyu bakka jirrutti injifannoo caalmaaf akka hojjannu maqaa koo fi maqaa Mootummaa Naannnoo Oromiyaatiin dhaamsa dabarsaa gammachuu guddaanatti dhagahame ibsuun barbaada.
Baga Gammaddan! Baga Gammanne!
Injifannoo irratti Injifannoo!
Itti Aanaa Preezdaanti Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Buufanni Xiyyaara Ityoophiyaa Aviiyeeshin Akkaadaamiin ogeessota 384 eebbisiise
Ministeerri Barnootaa dorgommii saayinsii fi hojii kalaqaa manneen barnootaa…
Qabiinsi mirga namoomaa manneen sirreessaa fooyya’uu sirreefamtoonni himan
Keeniyaan damee Tuuriizimii irratti Ityoophiyaa waliin hojjechuuf fedhii akka qabdu…